Sheekada filimka 102 Not Out: Amitabh iyo Rishi oo nolosha wax badan kaa bari doonaan – Filimside.net
Labada ruug cadaa ee astaanta u ah fanka Hindiya Amitabh Bachchan iyo Rishi Kapoor ayaa la imaadeen filimka xiisaha badan ee lagu magacaabo 102 Not Out.
Jilaayaasha filimkaan: Amitabh Bachchan, Rishi Kapoor, Jimit Trivedi.
Waqtiga uu soconaayo: 1-saac iyo 41-daqiiqo
Muxuu Ku Wanaagsan Yahay Filimkan: Si heer sare ah ayaa loo agaasimay fariinta filimkan, dhanka shactirada, hadalada, qiirada iyo nolosha arimaha qoyska si gaar ah Amitabh Bachchan iyo Rishi Kapoor bandhigooda waa mid Classic ah.
Muxuu Ku Liitaa Filimkaan: Haddii aan dhalinyaro u baahan tahay waa macquul inuu ku yara dhibo filimkaan waayo Amitabh oo 102 jir matalaayo iyo Rishi oo 75-jir matalaayo ayaa ku daawan doontaa filimkaan cilad kale malahan oo aan dhalin yarada maanta inaysan wax ka jileyn.
Fariinta Filimka 102 Not Out Oo Kooban: Dattatraya Vakharia (Amitabh Bachchan) waa aabo 102-jir ah hadafkiisana wuxuu yahay inuu noqdo ninka ugu da’da weyn dunida ka hor inta uusan geeriyoonin wuxuuna rabaa 16-sano dheeraad ah inuu noolaado si uu rikoorkaas ula wareego.
Sidaa darteed Dattatraya Vakharia (Amitabh Bachchan) si uu yoolkiisa u gaaro waxaa looga digaa inuu ka fogaado nolosha muranka iyo niyad jabka badan ama dadka isaga aan xiiso galineyn.
Laakiin Dattatraya Vakharia (Amitabh Bachchan) wiilkiisa Babulal Vakharia (Rishi Kapoor) waa mid nolosha aan xiiso u qabin sidoo kalena dhib badan una dhaqmo dadka xiligaan casriga nool oo kale.
Sidaa darteed aabo Dattatraya Vakharia (Amitabh Bachchan) wuxuu go’aansanaa inuu wiilkiisa Babulal Vakharia (Rishi Kapoor) u diro tuulada ay kasoo jeedaan si dhaqamadii hore loo soo baro una soo noqdo qof xasiloon oo nolosha hadaf ka leh.
Babulal Vakharia (Rishi Kapoor) wuxuu dhibsanaa nolosha halka loo diray asigoo ka hor imaanayo go’aanka aabihiis si uu ula noolaado.
Laakiin aabo Dattatraya Vakharia (Amitabh Bachchan) wuxuu wiilkiisa u dajinaa sharciyo adag haddii uu doonayo inuu guriga kula noolaado.
Waxa ugu dhibka badan waxay tahay aabo 102-jir ah inuu 16-sano dheeraad ah sii noolaado ayuu rabaa halka wiilkiisa 75-jir ah nolosha ka quustay dhimashadana marwalbo ka fikiro!!
Filimkaan qaybihiisa dambe waxaa loo daawanayaa aabo iyo wiilkiisa kal aragti duwan sida ay u wada noolaan karaan ayagoo cimrigooda heer gabo gabo ku dhow yahay.
Bandhiga Filimka 102 Not Out: Amitabh Bachchan iyo Rishi Kapoor lama kala saari karo bandhig ahaan mid wanaagsan madaama labo door oo aad isugu dhigmaan saameyn ahaan la siiyay.
Waxayna filimkaan ka dhigeen mid aan laga xiiso dhigeyn run ahaantii waa wax aan la aamini karin da’da ay jiraan Amitabh iyo Rishi iyo sida ay filimkaan uga baxsadeen mada daalo ahaan iyo is fahanka ka dhaxeeyo.
Maba loo maleeyo in 28-sano ka hor isugu dambeesay inay Amitabh Bachchan iyo Rishi Kapoor shaashada kasoo wada muuqdaan.
Fariinta Filimka 102 Not Out Maxaa Laga Yiri : Director Umesh Shukla fariin sahlan ayuu doortay sidoo kalena qaab wacan ayuu isugu daba riday gaar ahaan dareenka qiirada badan ee Amitabh iyo Rishi ka dhaxeeyo iyo sida ay u shactireenayaan ayaa ah wax si qurux badan loo diyaariyay.
Halka saac ee hore xoogaa yar habacnsanaan ayaa ka muuqato isku xirka fariintan laakiin wax walbo waxaa qariyeen bandhiga shaashada Amitabh iyo Rishi.
Gunaanad: 102 Not Out waa filim nolosha micno badan inay ku fadhiso laga baran karo sidoo kalena fariintiisa wacan tahay, wuxuuna xambaarsan yahay fariin qoysaska dadka da’da ah muhiim u ah waana hubaal in dawaadayaal ku filan uu kasban doono.
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka 102 Not Out:
sxb saka filmki avtar ee govinda iyo suny deol xage ku danbeyay maxa kala socota shaqadisa
Waa filim la iska sheegay oo aan horey loo wadin mana u eko mashruuc hirgalaayo.